Giuseppe Conte Raysalwasaaraha Taliyaaniga Ayaa Ogalaaday Gudida Olambikada Qaranka CONI Ee Hakinta Ciyaaraha Dalkaasi? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Raysalwasaaraha Taliyaaniga Giuseppe Conte ayaa ogolaaday golihii gudiga olimbikada qaranka ee loo yaqaan ‘CONI’ in la hakiyo dhamaan dhacdooyinka isboorti ee ka dhaca wadanka talyaaniga ilaa iyo 3da Abriil ka dib markii wadanka oo dhan laga joojiyay cuna qabatayn fadeexadii coronavirus.
Dhamaan isboortiga waxaa horey loogu baahnaa in ay ka dhacaan albaabada xirnaa illaa Abriil kadib amar dowladeed oo horay loo soo saaray, laakiin CONI ayaa ku dhawaaqday talaabooyin cusub Isniintii shalay ka dib markii ay kordheen kiisaska.
Conte wuxuu xaqiijiyay in go’aanka CONI la dhaqan gelin doono, iyadoo ra’iisul wasaaraha uu ku dhawaaqay joojinta Serie A iyo dhammaan dhacdooyinka isboorti madaama uu ku soo rogay xaddidaadda dhaqdhaqaaqa bulshada oo dhan, isagoo horay u jiray kaliya meelaha loogu yeero “aagagga gaduudka” .
Dhammaan isu imaatinnada dadweynaha ayaa mamnuuc ka ah kuwa aan ahayn shaqada ama ujeedo degdeg ah mooyee, oo wadarta guud ee ah 9,172 qof uu cudurka ku dhacay illaa Isniinta.
Conte waqti dheeri ah ma jiro, nambarada ayaa inoo sheegaya inuu jiro koror la taaban karo oo ku saabsan cudurka, daryeelka degdega ah iyo dhimashada, ”Conte ayaa shirkiisa jaraa’id ku sheegay.
Caadooyinkayagu waa inay isbedelaan, waa inaan wax u hurnaa wax wanaaga Talyaani oo dhan. Sidaa darteed ayaan u qaadan doonaa xitaa tallaabooyin adag.
Waxaan saxiixi doonaa qaraarka cusub, kaas oo lagu soo koobi karo weedha ‘Waxaan guriga ku ahay’. Ma jiraan aagag casaan ah oo kale, waxaa jira Talyaani oo la ilaaliyo.
“Waa inaan ka fogaano safarka haddii aan la caddeynin sababo shaqo awgood, sababo caafimaad ama baahiyo kale mooyee. Waxaan mamnuucnay isu imaatinka dadweynaha.
“Waxaan sidoo kale maskaxda ku haynaa talaabooyin adag oo xagga maskaxda ah dhacdooyinka isboorti. Serie A iyo dhamaan tartamada isboorti guud ahaan waa la joojiyay Dhamaan taageerayaasha waa inay aqbalaan taasi.”
Ma cadda waxa ay tani uga dhigan tahay kulamada Champions League iyo Europa League oo ay ku lug leeyihiin kooxaha Talyaaniga.
UEFA wali dib uma dhigin wax kulan ah, laakiin waxay xaqiijisay Isniinta soo socota ee AS Roma kulanka Sevilla ee ka dhici doona Stadio Olimpico 19ka March in lagu ciyaari doono gadaashiisa albaabada xidhnaa.
Tartan kale oo UEFA ah, Euro 2020, ayaa lagu wadaa inuu ka bilowdo Rome 12ka Juun.